तुवाचुङ साप्ताहिक वार्षिकोत्सवका वक्ता कसले के भने - Tesro Ankha
अनुशासित बनाउन ‘मिडिया’
वडाध्यक्ष, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ महादेवस्थान
सुरु–सुरुमा तुवाचुङ साप्ताहिक पठनीय लाग्दैनथ्यो । बिस्तारै खोजी–खोजी पढ्नेखालको बन्यो । समाजको ऐना बनोस् भनेर पूर्ववक्ताहरूले तुवाचुङ साप्ताहिक परिवारलाई शुभकामना दिइसक्नुभएको छ । मेरो पनि थुप्रै शुभकामना ।
समाजमा भए/गरेका राम्रा नराम्रा गतिविधिलाई पत्रिकाले समाचार बनाएर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । गरिरहेकै छ । प्रत्येक नागरिकलाई अनुशासित, पारदर्शी बनाउन सिकाउने गतिलो माध्यम पत्रिका पनि हो ।
नराम्रोको बीउ मास्नुपर्छ
वडासदस्य, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ महादेवस्थान
राम्रोलाई काँधमा बोक्ने र नराम्रोको जरैदेखि काटेर फाल्ने पत्रकारिताको कामै हो । जरैदेखि काटेर फालेमा नराम्रोको बीउसम्म रहँदैन । तुवाचुङ साप्ताहिकले त्यस्तै काम गरोस् । गर्दै आएको पनि छ । त्यस्तो अभियानलाई सार्थक बनाउन हामीले पनि सकेको सहयोग गर्न तत्पर छौं ।
पीडित लाभान्वित, पीडक लाखापाखा
सदस्य, काँग्रेस जिल्ला कार्यसमिति खोटाङ
सञ्चारमाध्यमको मूल मन्त्र भनेकै आवाजविहीनको आवाज बन्नु हो । तुवाचुङ साप्तहिकले त्यो काम गरेकै छ । झुपडी र गाउँ–बस्तीका कथा–व्यथा पढ्न पाएका छौं । नगरलाई आधारभूमि बनाएर प्रकाशित तुवाचुङले नगरमात्रै होइन, जिल्लाकै विकृति र विसंगतिप्रति औंला ठ्याएको छ । उसको साहसले पीडित लाभान्वित र पीडक पाखा लाग्न बाध्य छन् ।
पत्रिकालाई हामीले के/कति सहयोग गर्न सक्यौं लेखाजोखा भएकै होला । पहिलो वर्ष पत्रिकाको कागजको गुणस्तरीयता उच्च थियो । दोस्रो वर्षको पहिलो अंकदेखि ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’ मा देख्दा पत्रिका प्रकाशन गर्न समस्या होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । पत्रिका ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’ नै भए पनि खुराकमा कमी नहोस् । पत्रिका स्तरोन्नतिका लागि पाठकका हिसाबले गर्नुपर्ने सहयोग गर्न तत्पर छु ।
पानी पार्ने कृत्रिम बादल
जिल्ला कमिटी सदस्य, नेकपा खोटाङ
तुवाचुङ साप्ताहिकले छलाङ मारेको खबर पत्रकारबाटै सुन्न पाउँदा गर्व लागेको छ । पत्रकार भनिन जति सजिलो छ, पत्रकार भइरहन त्यत्तिकै गाह्रो छ । तर, तपाईंहरूले आफ्नो सारा लगानी यही क्षेत्रमा गरिरहनुभएको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय, महिलासम्बन्धी समाचारले तुवाचुङमा ठाउँ पाओस् । जनप्रतिनिधि निश्चित समयका लागि निर्वाचित हुन्छन् । राजनीतिक दल पनि साना ठूला भइरहन्छन् । तर, पत्रकारको हैसियत जहिल्यै उस्तै हुन्छ । त्यसलाई बचाइराख्न सक्नुपर्छ ।
समाजसेवामात्रै नभएर, पत्रकारिताले दिशानिर्देश पनि गर्छ । विदेशतिर क्यालेन्डरमै कहिले पानी पर्छ, कुन समयमा खडेरी लाग्छ भनेर क्यालेन्डरमै उल्लेख गरिन्छ । राज्यले त्यसो गर्न नसके पनि तुवाचुङले त्यस्ता सामग्री पस्कन सकेको भए खोटाङेले वैशाख, जेठमा मकै छर्दैनथे । उनीहरूले दुई महिनापछि मात्रै मकै छर्नुपर्दोरहेछ भन्ने ज्ञान पाउँथे ।
लामो खडेरी बेहोरेका किसानले लगत्तै झरीसँग जुध्नुपर्यो। जलवायु परिवर्तनको असरले उनीहरूलाई आक्रान्त बनाएको छ । त्यसबारे तुवाचुङले समाचार/आलेख प्रकाशित गर्नुपथ्र्यो । एउटा उदाहरण पेस गर्छु– थाइल्यान्डमा सुख्खा भयो भने पानी नपरेको क्षेत्रमा दुईवटा विमान उडाइन्छन् । दुवैमा फरक–फरकखालका बादल उडाइन्छन् । त्यसपछि सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानी पर्छ । त्यस्तो प्रावधान भएपछि किसान लाभान्वित हुने नै भए । यस्ता सामग्री तुवाचुङले पस्केको खण्डमा राज्यको पनि आँखा खुल्ने थियो कि ?
हामी पनि तपाईंहरूसँगै छौं
नगर सचिव, नेकपा, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका
तुवाचुङ साप्ताहिकले विभिन्न अंकमा समाजका अन्याय, अत्याचारबारे उजागर गर्दै आएको छ । बोेल्न नसक्नेको आवाज बनेको छ । योक्रम जारी रहोस् । बोल्न नसक्नेको बोली बोल्दा धाक–धम्की दिने पनि भए होलान् । त्यस्ताको विरुद्ध हामी तपाईंहरूसँगै हुनेछौं । तर, चार वडाध्यक्षले नगरसभा बहिष्कार गरेको समाचार तुवाचुङले प्रकाशित नगरेकोमा चाहिँ गुनासो गरें है ।
सुशासनको सहयोगी बन्न सकोस्
नगर सचिव, समाजवादी पार्टी, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका
तुवाचुङले नगरमा भए/गरेका राम्रा नराम्रा कामबारे लेख्दै आएको छ । तर, पूर्वाग्रही भएर कलम कहिल्यै नचलाउनुहोला । आफ्नो भूमिकाप्रति पत्रकार प्रस्ट हुनुपर्छ । तुवाचुङलाई यहाँसम्म ल्याउन पक्कै त्यति सजिलो थिएन । विविध कठिनाइसाथ यहाँसम्म आइपुग्दा पत्रिका सुशासनको सहयोगी बन्न सकोस् ।
शेशुका राईजस्ता खेलाडीबारे तुवाचुङमार्फत जानकारी पायौं । भ्रष्टाचार गर्नेको कडा समाचार पढ्न पाएकै छौं । तपाईंहरूले गरेको आँटप्रति सधैं सम्मान छ । आगामी दिनमा पनि बेथितिबारे समाचार पढ्न पाइरहूँ ।
शुभखबर सुन्न पाइरहूँ
नगर सदस्य, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका
पत्रिका प्रकाशनभन्दा निरन्तरता दिनु ठूलो काम हो । सीमित स्रोत साधन भएको ठाउँबाट पत्रिका प्रकाशन गर्नु सराहनीय काम हो । सराहनीय कामले अनुकरणीय नतिजा ल्याउँछ । त्यस्तो शुभखबर सुन्न र पढ्न पाइरहूँ । पत्रिका निरन्तर प्रकाशनका लागि शुभकामना र बधाइ भनेरमात्रै पुग्दैन । पत्रिकाका लागि सकारात्मक सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छु ।
नगरवासीको आवाज बन्न सकोस्
वडासचिव, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ महादेवस्थान
असल नियत राखेर पत्रकारले कलम चलाउनुपर्छ । तुवाचुङ साप्ताहिकसम्बद्ध पत्रकारले पनि त्यसै गरोस् भन्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक होइन । नगरलाई आधारभूमि बनाएर पत्रिका प्रकाशित भइरहेको छ । काम गर्दै जाँदा जस/अपजस आउन सक्छ । सुन्न र सामना गर्न धैर्यवान् हुन सक्नुपर्छ । वर्ष दिनको अभ्यास हेर्दा तुवाचुङबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पत्रिका पठनीय बनोस् । सूचनामूलक बनोस् । नगरका विकास निर्माण र नीति निर्माण तुवाचुङले निगरानी गर्न सकोस् । पत्रिका ३२ हजार नगरवासीको आवाज बनिरहोस् ।
जिल्लाकै नमुना बनोस्
अध्यक्ष, हलेसी प्रतिष्ठान
तुवाचुङले हामीबाट के–कति माया पायो ? समीक्षा गर्नुभएकै होला । पाठकको माया, साथ–सहयोग पाइरहने वातावरण बनाइरहनुहोला । तुवाचुङ साप्ताहिक जिल्लाकै नमुना पत्रिका बनोस् । तुवाचुङले डिकुवाको बाइटार, चिपटार र राजापानीको भाडबेंसीका जनताका आवाज बुलन्द बनाउन सकोस् ।
२०७६ श्रावण २४ १०:४१